Ra’iisul-wasaaraha Soomaliya: al-Shabaab waa la tirtiri doonaa ugu dambayn August - Sabahionline.com
Ra’iisul-wasaaraha Soomaliya: al-Shabaab waa la tirtiri doonaa ugu dambayn August
Juunyo 11, 2012
Dawladda Federaalka Kumeel-gaarka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada huwanta ah ayaa qorsheeynaya in ay ka takhalusaan al-Shabaab inta ka horeeysa waqtiga ay dhammaanayso sharciyadda ku-meel-gaarnimada ee August, sidaana waxa sheegay Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali.
Soomaaliya ‘waxay u gudbaysaa dhinaca nabadda”: Wasiirka koowaad ee Soomaaliya
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo ku ceshay muhiimadda bixinta canshuurta iyo la dagaallanka al-Shabaab
Ciidamada isbahaysiga oo al-Shabaab ka eryay Xuddur
“Ciidamada Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa nabad-ilaalinta ee Midowga Afrika, ayaa waxa ka go’an in ay Soomaaliya ka tirtiraan awoodda al-Shabaab,” ayuu Cali Isniintii (11-kii June) ku yiri Shabakadda Wararka Shabeelle. “Al-Shabaab waxa ay lumisay inta badan dhulalkii ay ka talin jirtay muddadii 18-ka bilood ahayd ee ay socdeen weerarrada ay wadeen ciimada Midowga Afrika, dawladda Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya.”
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa huwantu waxa ay qabteen gobollo muhiim ah oo ku yaal koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, haddana waxa ay sii wadayaan dadaalkooda ay al-Shabaab kaga saarayaan meelaha gacantooda ku haray, ayuu yiri Cali.
June 12, 2012 @ 07:14:51AM
Ilaaahay ha nacdalao dhamaan kooxaha argagixisada ah ee isku dayaya inay fuliyaan weeraro xumaato iyo nacayb ku dheehanyahay, kuwaasoo u gol leh inay dadka ku dhex beeraan kala qaybsanaan, gacan-kahadal iyo dhagarqabnimo, waxaa intaasi dheer iyagoo sii hurinaaya dabka khilaafaadka jira. Argagixisadu waxay sababeen dhimashada dad badan oo aan waxba galabsan, halkaasoo ay dadkaasi ku dhinteen qaraxyadii, ismiidaamintii, dilkii, afduubkii, umuldooxii, tuugadii, jidh-dilkii iyo ku-xadgudubkii joogtada ahaa ee isdaba jooga ahaa, ee loo gaystay muwaadiniinta aan waxba galabsan. Kooxahani waa kooxo argagixiso ah, kuwaasoo u heegan ah inay xoolo urursadaan islamarkaana ay ku ciyaaraan qaranka amaankiisa iyo daganaanshihiisa. Ujeedadoodu waa inay soomaaliya ka dhigaan meel fawdo ah oo aan salka dhigan, oo aysan ka jirin nabad iyo daganaansho midna. Markaa ilaahay ha nacdalo qof kasta oo dadka u gaystay dhibaato, waxyeelo, argagixiso iyo shar. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qofkasta ka badbaadiyo sharkooda iyo waxyeeladooda, oo uu dalka usoo cesho nabadiisii. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dalalka ay dhibtanoo kale haysato uu dhamaan ka dul qaado dhibtan. Qof kastaa wuxuu haatan dareensanyahay cadaadiska ay sababeen dagaalada iyo argagixisadu, ee ay ka dambeeyeen kooxahaas dhagarqabayaasha ahi ee gaangistarada ah. Waxay kooxahani isku dayayaan inay xoog ku qabsadaan dadka, waxaanay ka faa’idaysanayaan xaaladda xun ee dalku ku jiro, iyagoo raba inay dadka soo dhex galaan, kadibna ay argagax iyo cabsi ku ridaan. Kooxahani waxay rabaan inay fidno, madhab-nacayn, calool-xumo, cadaawad iyo dagaal sokeeye ay dadka ku dhex beeraan, si ay fawdadu dalkoo dhan u gaadho.
Omar Sheikh Abdi
June 12, 2012 @ 06:54:21AM
Soomaaliya waxa ka jira kooxaha argagixisada kuwooda ugu khatarsan qaarada afrika, kooxdaasi waa kooxda alshabaab, waxaanay dadka ka gashay dhagaro farabadan, waxaanay baabiisay dadka maalkoodii. Dambiga ama dhagarta ugu wayn ee ay kooxdani gashay waa shaqaaleynta caruurta, iyo u adeegsigooda sidii oo ay yihiin askar, iyagoo leh carruurta waa laga takhalusi karaa. Sidoo kale, kooxda alshabaab waxay ku lug leedahay dilka, halkaasoo ay kooxdani layso dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, dadkaasoo ku dhinta dagaalada ay kooxdu la gasho dawladda federaalka ku meel gaadhka ee soomaaliya. Kooxda alshabaab waxay sidoo kale ku lug leedahay falal-dambiyeedka ka dhaca dalalka jaarka ah, sida Kenya iyo itoobiya. Dambiyadani waa qaar aan u wacnayn dadka soomaaliyeed iyo qaarada afrika toona guud ahaan, sababtoo ah maalgashadayaasha shisheeye ayay fogaynayaan, arrinkaaso si xun u saamaynaya dhaqaalaha qaarada afrika.